Waqooyiga Kuuriya oo waynaysa xiriirkii Ganacsi ee kala dhexeeyay Shiinaha | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Waqooyiga Kuuriya oo waynaysa xiriirkii Ganacsi ee kala dhexeeyay Shiinaha
Waqooyiga Kuuriya oo waynaysa xiriirkii Ganacsi ee kala dhexeeyay Shiinaha
Shiinaha(SONNA) Xukuumadda Beijing ayaa sheegtay in ay xadidayso xiriirka dahnka ganacsiga shidaalka ee ay dowladda Waqooyiga Kuuriya kala dhexeeyo Shiinaha,Waxaa sidoo kale la joojinayaa iibka dharka ee dalkaasi Waqooyiga Kuuriya laga soo iibsado.
Wadamada Shiinaha iyo Waqooyiga Kuuriya ayaa waxa ka dhexeeya xiriir ballaaran oo dhanka ganacsiga ah,kaasi oo haatan u muuqda mid sii xumaanaya kadib markii Kuuriyadda Waqooyi lagu soo rogay xayiraado horleh.
Joojinta iibinta dharka ayaa xukuumada Waqooyiga Kuuriya waxay ku noqonaysaa dhabarjab weyn,taasi oo qeyb ka ah talaabooyinka la doonayo in lagu ciqaabo Xukumadda Pyongyang oo ku adkaysanaysa in ay sare u qaadayso Gantaaladeeda Nuclearka ah.
Shiinaha ayaa saaxiib soo jireen ah la ahaa Waqooyiga Kuuriya, balse tijaabooyinka hubka ee Pyongyang ayaa arrimahani sababay,kadib markii xubnaha joogtada ah ee Golaha Ammaanka ee Qm iyo golaha loo dhanyahay ay si isku mid ah u cambaareeyeen horumarinta barnaamijka Nuclearka ee Kuuriyada Waqooyi.
War ka soo baxay Wasaaradda Ganacsiga ee Shiinaha ayaa lagu sheegay in tilaabooyinkani ay hirgeli doonaa bisha Octobar kowdeeda.
Waqooyiga Kuuriya waxaa sidoo kale ay kala fogaanayaan wadanka Maraykanka oo weerar afka ah ay hadda isku hayaan,afar iyo labaatankii saacadood ee la soo dhaafay waxaa Dolwadda Kuuriyada Waqooyi ay sheegtay in aanay joojin doonin gantaalada Nuclearka ah,iyadoo hogaamiyaha wadankaasi uu si kulul u weeraray siyaasadda madaxweyne Donald Trumka Mareykanka.
Previous articleSomalia iyo Suudan oo ka wada hadlay iskaashiga Ganacsi
Next articleFrancisco Madeira” Dhalinyarada katirsan Al-shabaab haka faaiideystaan fursadda Dowladda Soomaaliya oo haka soo baxaan Al-shabaab”